Milateriga Itoobiya oo sheegay in ay gacanta ku dhigeen Mekelle | Berberanews.com
Home WARARKA Milateriga Itoobiya oo sheegay in ay gacanta ku dhigeen Mekelle
Tigtay-(Berberanews)-Taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya, Jeneraal Berhanu Jula, ayaa sheegay in ciidamadiisu “si buuxda gacanta ugu dhigeen” magaalo madaxda gobolka Tigray ee Mekelle.
Sheegashadiisan ayaan ilaa haatan cid madax bannaan oo xaqiijinaysaa jirin.
Dhanka kale, xoogagga Tigray ayaan iyaguna ilaa haatan dhinacooda fal celinin hadalkaa uu shaaciyey taliyuhu.
Mar sii horaysay ayaa hogaamiyaha xoogagga fallaagada ah ee gobolka Tigray ayaa sheegay in ciidamada dawladda Itoobiya bilaabeen guluf ay doonayaan in ay ku qabsadaan magaalada Mekelle ee caasimadda gobolkaas.
Af-hayeenka xafiiska ra’sial wasaraha, Billene Seyoum, ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya aanay “duqaynayn” goobaha rayidka ah, waxaanay intaa ku dartay in “bedqabka dadka rayidka ah ee reer Itoobiya ee ku nool Mekelle iyo gobolka Tigray tahay arin mudnaan u leh xukuumadda federaalka”.
Milateriga federaalka oo guulo sheeganaya
Militariga dalka Itoobiya ayaa waxay shegeen inay gacanta ku dhigeen dhowr magaalo oo ku taalla gobolka Tigrey ee Waqooyiga Itoobiya.
Milatariga Itoobiya ayaa muddo toddobaadyo ah dagaal xooggan kula jiray xoogagga Tigrey.
Janaraal Xassan Ibrahim ayaa sheegay in Milatariga ay gacanta ku dhigeen Wikro, iyo magaalooyiin kale oo ku teedsan caasimadda gobolka Tigrey ee Mekelle.
Hadalka afhayeenka ayaa ku soo beegmaya xilli ay dowoladda sheegtay inay bilaabayso “wajigii ugu dambeeyay” ee howlgalka Tigrey.
Boqollaal qof ayaa lagu soo waramaya inay ku dhinteen dagaalka, halka kumannaan qof lagu qasbay inay guriyahooda ka qaxaan.
Kulan uu shalay la qaatay ergo ka socotay midowga Afrika ayaa rai’sul wasaare Abiy Ahmed waxaa uu u sheegay in la dhowri doono badqabka dadka rayidka ah ee gobolka.
Balse lama soo hadal qaadin suurtagalnimada wadahadalo lagu soo afjarayo dagaalka.
Horey rai’sul wasaaraha Itobiya waxuu sheegay in militariga ay isku dayi doonaan inaysan waxyeelo u geysan dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Mekelle.
askar itoobiyan ah
Previous articleMilatariga Ethiopia oo la wareegay Gacan-ku-haynta Caasimadda gobolka Tigray iyo Wararkii u dambeeyey
Next articleMaareeyaha Dekedda Muqdisho oo ka badbaaday qarax